"Le lundi au soleil..." tout le monde enr^ve. Il faut sourire à tout moment...
Mahasambatra ny mitsiky, toetra nahariana antsika izany
Voaantso ho amin’ny fahasambarana sy hafaliana ny olona rehetra. Maro ankehitriny ireo tsy mahita hafaliana intsony eo amin’ny fiainana. Misy voahangy sarobidy napetraky ny nahary ao amintsika anefa dia ny tsiky sy ny fitiavana. Isan’ny loharano ipoiran’ny hafaliana ireo. Fifampizarana.
“Arakaraka ny itsikiana no mahasambatra, nefa koa arakaraka ny mahasambatra no itsikitsikiana”. Isan’ny nifampizarana tamin’ireo tanora, tonga tao amin’ny oratorio Don Bosco izany, teny Ivato, ny sabotsy 14 febiroary lasa teo. Fanalahidy mitondra mankany amin’ny fahasambarana ny tsiky. Nohariana hiaina ao anaty fiadanana sy hafaliana ny olona. “Aoka tsy hohadino, hoy ny Papa Fransoa, fa ny fahasambarantsika no sitrak’Andriamanitra”. Toetra mifanohitra amin’ny tanjon’ny Mpahary noho izany ny alahelo sy hakiviana. Manentana ny tanora ho sahy hiaina izany hafaliana sy hasambarana izany ny Papa. “Manàna herim-po ho sambatra”, hoy ny hafany, ho an’ny sampankazo 2015, andron’ny tanora. Tsy misy fahasambarana ao anatin’ny alahelo anefa fa izay faly ihany no sambatra.
Voninkazo ny fahatanorana: fotoana ivondronan’ny hatsarana rehetra. Fa ho tsara kokoa izany raha ravahana tsiky. “Tokony hananan’ny tanora rehetra ny toetra mitsiky”, hoy i Rasolomanana Louis Didier, tompon’andraikitra ao amin’ny EVA sy ny DIDEC, mpisera amin’ny tanora, nitarika ny fifampizarana tamin’io andro io. Zava-tsoa sarobidy nomena antsika ny tsiky. Tolotra tsara indrindra. Tsy vidim-bola fa voajanahary ao anaty. Ho hafa ny andronao raha atomboka amin’ny tsikitsiky. Ary ho faly aminao sy ho tia anao ny olona satria manintona foana ny olona miramirana. Mahasoa anao sy ny hafa ny mitsiky.
Hoy koa ny mpandinika: “safidy ny fahasambarana ary ny tsiky no manampy hanao izany”. Koa raha somary ketraka eo amin’ny fiainana, miezaha mitsiky. Hotsapanao miaraka amin’izay fa misy fiovana lehibe eo amin’ny toe-piainanao. Raha mamela soritra amin’ny endrika ny “stress” mahazo antsika; ny tsiky kosa manakana izany tsy hiseho. Fijery miabo no ao ambadik’io, ka “na inona na inona mitranga dia arahina tsikitsiky lava”, hoy ny mpanakanto.
Mariky ny fitiavana sy fahazavam-po ny tsiky. Raha tiana haharitra ny hafaliana dia “aza matahotra hiaina ny fitiavana marina ampianarin’i Jesoa antsika”, hoy ny Papa. Mampiray, mampifankatia, tsy mihatsara velatsihy izany fitiavana izany. “Tsy mialona”, hoy i Paoly apositoly. Raisina ho hafalian’ny tena ny hafalian’ny hafa. Mifaly miaraka aminy satria tsara ny nataony; “mifaly noho ny fahamarinany”. Misy sarisarin-kafaliana anefa, tsy tena izy.
Tohero ny hafaliana manodoka
Raha maharitra ny hafaliana, dia avy amin’Andriamanitra; raha miserana kosa dia avy amin’ilay fahavalo. Fanamby apetraky ny Papa ny “ho sambatra”. Ary amporisihiny ny tanora hanohitra ny hasambarana manodoka arentirentin’izao tontolo izao. Misy manko ny milaza, hoy izy, fa “ ny zava-dehibe dia ny mifaly ny anio. Tsy ilaina akory ny mandray an-tanana ny fiainana na manao safidy hentitra sy maharitra; satria tsy fantatra izay havoakan’ny rahampitso”. Tsy izy izany hafaliana izany. Ary fitiavana manodoka ny toy izany fa tsy tena izy. Voahosihosy ny hasin’ny fitiavana raha izany, hoy ny Papa. Ny fiombonana, ny tsy fivadihana ary ny fandraisana andraikitra: izany no hatsarana sy lanjan’ny fitiavana.
Fa isan’ny re matetika eny amin’ny tanora ankehitriny ny hoe: “leo aho! Tsy vitako intsony!”, “Hamono tena aho!”,… Mazàna antony ara-pitiavana no mahatonga an’ireo. Vokany: kivikivy, malahelo lava, tsy mahita hafaliana intsony. Mifikira ao amin’i Jesoa, hoy ny Papa, fa “izy irery ihany no afaka hanome fahafaham-po ny hetahetanareo, izay matetika ketraka noho ny fampanantenana manodokan’izao tontolo izao”.
Article publié dans Lakroa du 1er mars 2015, page 12